Ho irery sy ny fahatsapana ho irery, na izany: Olona iray no tsy maintsy hihaona. - Atoa Minimalist - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ho irery sy ny fahatsapana ho irery, na izany: Olona iray no tsy maintsy hihaona. - Atoa Minimalist
Roa ireo avy eo mba ho hitafy ny tenanao
Tamin'ny Fotoana voalohany, angamba, ny eritreritra fa mampahatezitra ny tahotraMieritreritra angamba ianao Voalohany mikasika ny fomba ratsy ny feo, mba ho irery.
Na ny fomba ratsy te hahatsapa.
Tsy misy fifandraisana amin'ny hafa ny olona, ny namana na Olom-pantatra.
Irery aho, irery, tapaka avy amin'ny olona hafa
Fa izany indrindra eto fa mendrika ny fijery faharoa, sy ny manaiky fa ho irery sy ny fahatsapana ho irery roa tonta ho iray Medaly fa tsy Mitovy. Ny pejy fetra matetika ianao, dia afaka ianao mihitsy aza, angamba, amin'ny farany irery ary mety embitter raha ny hafa no manan-danja ho anao sy mankafy ny mahafinaritra ny fiainana ara-tsosialy. Inona no hevitry ny hoe ho irery ankehitriny? Inona marina no manirery? Ary izay zava-dehibe fahasamihafana lainga? Afaka ny ho eo afovoan'ny olona an-jatony sy mahatsiaro ho irery.
Izany dia, farany, tsy misy na inona na inona mitranga manodidina anao, ny maha irery no mahatsapa fa ao aminao no teraka sy velona.
Ny tena fihetseham-po ratsy izay angamba samy mahalala ny rehetra. Manirery mamaritra ny toe-javatra, mba hahatsapa ny anatiny, mitoka-monina. Ratsy ny toe-Draharaha ao izay tsapantsika tsy misy ny mpiara-monina tena akaiky. Antsika ny miraiki-po amin'ny olona, mba ho afaka hizara aminao ny zavatra niainany, ny eritreritra sy fihetseham-po mba hizara no tsy ampy. Efa nahatsikaritra izany fihetseham-po, ohatra, eo amin'ny fotoana farany, araka izay efa nanapa-kevitra tao amin'ny mazava ho azy ny lalana ao amin'ny minimalism, Ny tsy mampiasa Facebook ho an'ny tanjona manokana.
(Azo antoka fa misy zavatra ratsy kokoa, ohatra, aho dia te-hanome anao fa indrindra ny rehetra, na izany aza, dia ohatra iray amin'ny minimalism.) Indray mandeha ity maharitra ara-tsosialy momba ny Facebook ahy mba miteny indray mandeha izany, amim-pahatsorana, dia nitarika mba mino ny tsy hita.
Tsy te-ho eto, fa miresaka momba ny inona marina Facebook ahy ary angamba ianao na tsia.
Satria na ny fomba ivelany fotsiny, ary fohy ny aina, ny fifandraisana, ary ny resaka mikasika ny Aterineto mety efa ho ahy, ka izy no nanome ahy ny fihetseham-po mba ho anjara isaky ny ara-tsosialy mba ho ara-tsosialy, mba mifandray. Rehefa nandao ny tambajotra sosialy, izany tsy ampy ho ahy any am-piandohan'ny fotoana, mazava ho azy, satria io fanapahan-kevitra io, efa tapaka ny fifandraisana ny olona sasany. Amin'izao fotoana izao dia samy hafa. Ny fivoahana amin'izao fotoana izao mikasika ny iray volana. Ny fiainako efa nivoatra. Izany ihany koa ny fiainana ara-tsosialy. Fa tsy mihoatra isan'andro anoloan'ny PC mifandray mipetraka amin'ny olon-kafa, aleoko mba ho mivantana amin'ny olona. Na, fara fahakeliny, miantso aho. Ny karazana fifandraisana manokana dia ny ahy ny tena. Ary ny sisa tavela tamin ' ny fotoana ny mampiasa ny fiainako mba hampivelatra. Ary tsy misy zavatra Tsara kokoa ho ahy noho ny: Afa-tsy tony ny rano ny zava-drehetra. Afa-tsy ao amin'ny mangina an-tsaina mazava fitaratra dia ny sary ny Tena sy ny fiainana. -Hans Marlies ho irery midika ho ahy ny fanahy iniana foreclose. Manapa-kevitra an-kalalahana sy an-tsitrapo ny mandany fotoana irery miaraka amiko. Nahoana no zavatra tena Tsara? Amin'izao fotoana izao: ao ny lasa, efa downright ny tahotra. Nila olona manodidina ahy, te-hahatsapa ampiasaina, ary any ho any koa, mazava ho azy, tiany. Mba hisaina ny fiainana, ny tanjona, sy ny zavatra nataony aho, dia nandoa ny saina ny sasany amin'ny fihetseham-pon'ny Hafa. Avy Izany aho dia nifindra tany ny fanekena, ny fiderana sy ny tsikera. Intsony ireo fanontaniana ireo dia misy ahy: Iza moa ianao? Inona no azonao atao? Inona no tianao ianao? sns. Fa na aiza na aiza aho nitady azy io, raha ao an-tranoko, ny tontolo iainana, ny fifandraisana, dia hitako fa tsy tena valiny fa. Ary noho izany dia hitako inona no tena tianao. Izaho efa nihaino ny eritreritro, tsy mitsara na mandrefy.
Dia nanenjika ny eritreritra rehetra.
Nitondra ahy sasany ny fotoana. Ary farany dia tonga ny fotoana izay lohako dia foana. Tsara zava-poana. Satria rehefa ny lohany dia tony, dia manaiky tsara indrindra izay ianao no nanao ny. Afaka mahita mazava tsara hoe iza ianao ambany ny fatiny. Ianao tena marina amin'ny tenanao. Nanomboka tamin'izay, dia irery ho saika lasa karazana Fombafomba.
Indray mandeha isan-kerinandro aho handray ny hita taratra ny fotoana.
Afaka mijery foana isan-karazany. Izany dia zava-dehibe ihany ny hifantoka amin'ny tenanao. Noho izany, raha toa ka manana fanontaniana ireo ao an-tsaina, dia mety mahatsapa ho irery na fotsiny mazava loha te-ho hita taratra eo amin'ny fiainana sy ny tanjona hampifanaraka avy eo dia manome azy Fahafahana. Maka fotoana kely mba hahafantatra anao. Raha te-hitondra ny fandroana. Ny vilany ny zava-pisotro ny toerana tena kafe na dite, mihaino ny toerana tena CD, aina ary mahazo ny lohany amin'ny alalan'ny Fisaintsainana na ny Yoga. Na inona na inona eny tianao ho voalohany hanao izany. Mahaiza mankafy ny fotoana, hihaino ny fahanginana hahatratra anao. Ny fianarana ianareo mba mahafantatra, mahita ny zavatra tena tianao. Mampianatra, raha azo atao, ny fiainana (farafahakeliny ny ampahany), taorian'izay. Ary avy eo dia mankafy izany. Mifalia sy ny fiainana. Ary ianao jereo: Raha afaka ianao, dia fantatro hoe iza ianao ary inona no tianao ny fiainana ara-tsosialy amin'ny fomba tsara. Noho izany, irery ihany, amin'ny maha-manirery toy izany. Farany, izany dia mba ho irery, fa ny manan-danja ihany koa ny avy amin'ny fahatsapana ho irery. Fampiasana ny fotoana miaraka aminao, mba hahita ny tena tsara indrindra, ary mitondra izany ho amin'ny mazava. Ary avy eo miezaka ny ho tia azy, ny hampiseho amin'ny hafa izay tena ianao anao.
amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy tsy misy fisoratana anarana video internet tsy misy fisoratana anarana online hitsena anao ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny ankizivavy maimaim-poana lahatsary internet maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana adult Dating tsy misy fisoratana anarana video Fiarahana ho maimaim-poana. Chatroulette avy amin'ny finday maimaim-poana jereo ny amin'ny chat roulette tranonkala ny lahatsary Mampiaraka